လိင်တူ စိတ်ဝင်စားနေကြောင်း ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ၀န်ခံရမလဲ ??? - Myanmarload
လိင်တူ စိတ်ဝင်စားနေကြောင်း ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ၀န်ခံရမလဲ ???
လွန်ခဲ့သော ၁ နှစ် က 10:40 December 13, 2017
ယနေ့ခေတ်အနေအထားအရ နိုင်ငံတကာမှာ လိင်တူ စိတ်ဝင်စားတာမျိုးတွေ ရှိလာပါတယ်။ ဒီလို ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာ လိင်မတူတဲ့ သူတွေနဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံချင်စိတ်တွေ ကုန်ဆုံးနေပြီး လိင်တူကို စိတ်ဝင်စားနေကြောင်းကိုလည်း ၀န်ခံဖို့ ဖော်ပြဖို့ ကိုလည်း ၀န်လေးပြီး အခက်တွေ့တတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုကိစ္စကိုသာ မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်က သိမယ်ဆိုရင် ဘယ်လို တု့ံပြန်ကြမလဲ ဆိုတာကိုလည်း တွေးပြီး စိုးရိတ်တတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ အမှန်တရားတစ်ခုကို ဖွင့်ဟ ၀န်ခံလိုက်တာက ချစ်ခင်ရသူတဲ့ မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းတွေအပေါ် အရိုးသားဆုံး ဆက်ဆံနိုင်မဲ့ နည်းလမ်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လိင်တူ စိတ်ဝင်စားကြောင်း ဘယ်လို ၀န်ခံရမလဲ ဆိုတဲ့ အချက်လေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
(၁) ကိုယ့်ကိုယ် ကိုယ် အရင်ဆုံး သေသေချောချာ နားလည်အောင် လုပ်ပါ။
(၂) ဒီအခြေအနေကို မဖြေရှင်းနိုင်ရင် ဆွေးနွေးတိုင်ပင် လို့ရမယ့်လူကိုရှာပါ။
(၃) ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အတွေ့အကြုံရှိသူ ပညာရှင်တွေနဲ့ ဆွေးနွေးအကြံပြုချက် တောင်းသင့်ပါတယ်။
(၄) တစ်လောကလုံးကို အသိမပေးခင်မှာ ကိုယ်နဲ့အရင်းနှီးဆုံးသူ (ယုံကြည်ရသူလည်း ဖြစ်၊ အကူအညီပေးမယ့်သူလည်းဖြစ်တဲ့ လူတစ်ယောက်ယောက်) အရင်ပြောဆိုကြည့်ဖို့ ကြိုးစားပါ။
(၅) မေးလာနိုင် မယ့်မေးခွန်းတွေလည်း ကြိုတင် စဉ်းစားပြီး အဖြေရှာထားပါ။ တတ်နိုင်သလောက် အချက်အလက်တွေစုပြီး အရာအားလုံးကိုအစွမ်းကုန်ရှင်းပြလိုက်ပါ။
(၆) သူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုက မကောင်းခဲ့ရင်လည်း ဒီကိစ္စကို လက်ခံပေးနိုင်ဖို့ သူတို့ကို အချိန်ပေးလိုက်ပါ။ လက်ခံနိုင်ဖို့အတွက် အတင်းအကြပ်ကြီး မတိုက်တွန်းပါနဲ့။
(၇) နာမည် ဒါမှမဟုတ် ဝတ်ပုံစားပုံကိုပါ ပြောင်းလဲဖို့ ရည်ရွယ်ထားတယ်ဆိုရင် ပိုပြီးစိတ်ရှည်ဖို့လိုပါတယ်။
(၈) ဘယ်အရာကိုမှ အလောတကြီးလုပ်ဖို့ မလိုပါဘူး။ အချိန်ယူပြီး သေချာစဉ်းစားပါ။ ပြင်ဆင်ပါ။
(၉) နာမည်ပြောင်းဖို့စဉ်းစားထားတယ် ဆိုရင်တော့ ဥပဒေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နောက်ပိုင်း ပြဿနာဖြစ်မလာစေဖို့ ဥပဒေရေးရာ စာရွက်စာတမ်းတွေကို အသစ်ပြင်ဆင်ဖို့ သတိရပါ။
ဖော်ပြပါ အချက်တွေ တခြား အချက်တွေလည်း ရှိနိုင်တာမို့ စဉ်းစားပြီး အချိန်ယူဖို့ ထပ်မံ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ ဝန်ခံလိုက်တဲ့ စစချင်းအချိန်မှာတော့ အခက်ခဲဆုံးအချိန် ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ကိုယ့်ကို နားလည်ဖို့တောင် အချိန်ယူခဲ့ရတာမို့ တခြားသူတွေ နားလည်ဖို့ကိုလည်း အချိန်ပေးပါ။
စနစ်တကျ အစီအစဉ် ရေးဆွဲတာက အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးပြီးသွားရင်တော့ ဘယ်အရာကိုမှ ဖုံးကွယ်သိုဝှက်စရာ မရှိတဲ့ ဘဝကို သတ္တိရှိရှိနဲ့ ရင်ဆိုင်နိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပဒေနဲ့ ကိုက်ညီနေတယ် ဆိုရင်တော့ ကိုယ်မှန်တယ်ထင်တဲ့အရာကို ကိုယ်လုပ်ခွင့်ရှိပါတယ်။ လက်ရှိ အခြေအနေကို ဝန်ခံသည်ဖြစ်စေ ဝန်မခံသည်ဖြစ်စေ ကိုယ့်အပေါ်မှာ တကယ်မေတ္တာရှိသူကတော့ ဆက်ပြီး ချစ်ခင်နေဦးမှာမို့ အမှန်တရားကို ၀န်ခံဖို့ သတ္တိရှိလိုက်ပါ။
Page generated in 0.0590 seconds with5database query and5memcached query.